बुढासुब्बाको उपाधि कसलाई— पुलिस कि थ्री स्टार ? - Kheladi News Kheladi News
बुढासुब्बाको उपाधि कसलाई— पुलिस कि थ्री स्टार ?
माघ २६ गते २०७४ मा प्रकाशित
धरान(खेलाडी न्युज)- एकसाता बीचमा रुस्लान थ्री स्टार र नेपाल पुलिस क्लब बीच दोस्रो पटक फाईनल खेल्दै छन् । धरानमा आयोजित रेडबुल बुढासुब्बा गोल्डकपको लागि दुवै टोलीले भोलि शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यी दुवै टोलीले गएको शनिबार नै पोखराको मैदानमा उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । बाजी भने नेपाल पुलिस क्लबले थ्री स्टारलाई १—० गोलले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको थियो ।
दुवैले उपाधिको लागि आफुहरु तयारी रहेको बताएका छन् । दुवैले नकाउट फुटबलको उपाधि उचालिसकेका छन् । दुवैलाई सिजनको दोस्रो उपाधि हुने छ । इटहरी गोल्डकप थ्री स्टारले जितेको हो भने नेपाल पुलिस क्लबले भने आहा रारा गोल्डकप जित्दै दोस्रो उपाधिको खोजीमा छ । थ्री स्टारले कोलकोत्तालाई पराजित गर्दै फाईनल सुरक्षित बनाउँदा पुलिसले सिएमजी संकटा क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो ।
पुलिसले सबै युवा खेलाडीलाई मैदान उतारेको छ । थ्री स्टारले पनि आफना पुरानै खेलाडीलाई लिएर डेढवर्षपछि पुनरागमन गरेको हो । दुवै टोली परिचित नै छन् । छ लाख नगद राशीको पुरस्कार जित्न दुवै आतुर छन् । यद्यपी दुवैले आफनै रणनीति बुन्न भने व्यस्त छन् । पुलिसले दोस्रो उपाधि उचाल्दै थ्री स्टारलाई पछि पार्ने योजनामा छ । तर थ्री स्टारले पनि पोखराको मैदानमा व्यहोरको हारकोा हिसाबकिताब गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । त्यसको लागि आफनो रणनीतिलाई अख्तियार गर्ने योजनामा प्रशिक्षक मेघराज केसी छन् । शनिबारको फाईनल खेल जित्ने रणनीति बुन्न प्रशिक्षक मेघराज केसी व्यस्त छन् । पोखरामै झैं बुढासुब्बा गोल्डकप पनि टप्स हुने विश्वास नेपाली पुलिस क्लबका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाको बुझाई छ । पोखराकै लयमा फाईनल देखाउने लक्ष्य पुलिसको छ ।